Sidee loo raadsadaa istiikarada Telegram-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo raadiyaa istiikarada kujira Telegram?
April 27, 2021 0 comments 340
Ma jeceshahay istiikarada? Maanta waxaan ku bari doonaa sida ugu macquulsan uguna xiisaha badan ee aad nooga heli karto Telegram. Animations-ku waxay u yimaadeen inay sheekadeena ka dhigaan mid caqli gal ah oo xiiso leh. Marka waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nala joogto oo aad waxbadan ka barato adduunkan madaddaalada ah.
Telegram wuxuu hogaamiyaa marka ay timaado istiikarada. Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ay sameysay arjiga fariimaha, istiikarada cusub iyo kuwa xiisaha leh ayaa lagu daray. Taasi waa sababta maanta aan kuu tusineyno qaab fudud oo ku saabsan sida loo helo oo loogu daro istiikarada Telegram-keena.
Waad abuuri kartaa istiikaradaada
Istiikarrada Telegram -ku waxay sii ahaanayaan kuwa ugu cadcad ee dadweynaha. Horumariyayaashu waxay ku dadaalayeen inay siiyaan fursado badan isticmaaleyaasha, kuwaas oo hadda abuuri kara istiikarada iyaga u gaar ah oo ay ugu gudbin karaan barxadda.
Tani waxay ahayd saameynta ay keeneen istiikarada Telegram waxay ku dartay tabkeeda gudahood arjiga. Hadda helitaankooda ayaa aad uga fudud ugana dhaqso badan sanadihii hore.
Ma garanaysid sida looga helo istiikarada Telegram? Halkan waxaan kuugu sheegeynaa wax walba, hab fudud oo dhakhso leh. Marka fiiro gaar ah.
Halka laga helo istiikarada loogu talagalay Telegram
Hadda waajib ma aha in la qoro si loo muujiyo fikrad. Waxaan isticmaali karnaa waxa loogu yeero istiikarada oo waxaan dhihi karnaa waxyaabo badan anagoon xitaa hal erey oran.
Tan iyo imaatinka astaamaha iyo dhejiska codsiyada farriinta noocan ah wadahadalkeennu gabi ahaanba wuu is beddelay. Hadda waxay u muuqdaan kuwo dheecaan badan, madadaalo iyo xiiso badan.
Ma ku cusub tahay Telegram oo ma taqaanid sida loo helo istiikarka? Mid ka mid ah hababka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee lagu bilaabi karo ururinta istiikarka ayaa ah inaad si toos ah u raadiso. Waxaad ku sameyn kartaa adigoo raacaya talooyinkan wax ku oolka ah:
Furan dalabka oo geli sheeko kasta
Riix halka ay dhoola cadeyneyso oo xulo "stickers"
Midig halkaas ayaa ka muuqda icon weyneynta. Kaliya waa inaad gujisaa oo qortaa eray gaar ah, tusaale ahaan "jacayl".
Codsiga wuxuu ku tusi doonaa dhammaan istiikarada la xiriira eraygaas. Hadda waa inaad doorataa xirmada aad doorbidayso oo guji "Kudar”Waxaa ku xiga“ KU DARSADA ”
Ku dar xirmo istiikar ah Telegram
Waxaa jira qaab kale oo loo raadsado istiikarada Telegram. Waxaad si toos ah uga sameyn kartaa sheekooyinka. Waa macquul inaad ku darto liiskaaga istiikarada ah ee xiriiradaada ay kula wadaageen:
Fur arjiga oo hel meesha lagu sheekeysto ama kooxda aad ka heshay istiikarada aad rabto inaad ku darto liiskaaga
Miyaad horay u heshay istiikarada? Waa hagaag, waa inaad heshay dhagsii shaashaduna waxay ku tusaysaa sanduuq ay ku jiraan dhammaan xirmooyinka la heli karo.
Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa guji xulashada "ISKU DAR"
Waxaad sidoo kale si toos ah ugu dari kartaa xirmooyinka istiikarada nooca webka codsiga. Nidaamku waa isku mid.
Fur arjiga Telegram ka kombiyuutarka
Madaxa wadahadalka meesha aad ka heshay istiikarka
Midig u guji warqadda dhejiska ka dibna riix xulashada "Kudar istiikarada"waana diyaar.
1 Waad abuuri kartaa istiikaradaada
2 Halka laga helo istiikarada loogu talagalay Telegram
3 Ku dar xirmo istiikar ah Telegram
Kudar bot ah koox Telegram ah
Sidee loo xannibaa twitter-ka?